Ogeysiiska Gaarsiinta - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Ogeysiiska kahor dalabka:
(1) Qaybaha ayaa lagu daray: Module-ka loo yaqaan 'LED module', fiilada calaamadaha ee u dhexeeya qaybaha, fiilada korantada ee udhaxeysa moduleka iyo korontada.
(2) Soo iibso qaybo isku mid ah: si looga fogaado dhalaalka iyo kala duwanaanta midabka hal shaashad, waa inaad soo iibsataa cutubyo isku mid ah. Taasi waa, waa inaad ka iibsataa modullada hal shaashad hal amar annaga ah.
(3) Digniin: Mawduucyadeena LED-ka MAYA AAN waxaa loo isticmaali karaa sidii qaybo dayactir ah oo aad horey u soo bandhigtay. Anaga ha siinin taageero farsamo ama adeeg haddii aad u adeegsan jirtay moduleyaasheena LED-ka si aad ugu beddesho modulladii hore ee LED-ka.
(4) Canshuur: qiimaheena kuma jiraan wax canshuuro ama canshuuro ah meesha loo soconayo, waa inaad sameysaa cadeyn kastam oo aad wadanka ku bixisaa dhamaan canshuuraha ama canshuuraha.
1. Qiimaha cutubka walxaha kuma jiraan kharashka rarka. Waxaad ka hubin kartaa qiimaha dhoofinta bogga gawaarida wax iibsiga ka dib markaad doorato tirada sheyga iyo meesha aad u socoto.
2.DHL express waa habka asalka ah. Kuwa kale sida EMS, UPS, FedEX iyo TNT ayaa la korsan doonaa oo keliya marka DHL aan la heli karin ama aan ku habboonayn goobta loo socdo; Haddii aad jeclaan lahayd inaad badeecada ku rarto badda ama hawada, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin.
3. Waxaan ku sii wadi doonnaa amarkaaga 2 maalmood oo shaqo gudahood marka helitaanka lacagta la bixiyo. Waxaan dib kaagala socodsiin doonaa taariikhda kale ee ugu dhaqsaha badan ee alaab keenista haddii alaabtu ka baxdo.
4. Waxaan kaliya u rarnaa cinwaanka la xaqiijiyay ee amarka. Marka cinwaankaagu waa inuu u dhigmaa cinwaanka rarka. Fadlan xaqiiji cinwaanka dirista ee koontadaada markaad bixinayso Wester Union ama kuwa kale.
5. Waqtiga transit-ka ee rarka waxaa bixiya xamuulka waxayna ka reebtaa dhamaadka usbuucyada iyo ciidaha. Waqtiga transit-ku wuu kala duwanaan karaa, gaar ahaan xilliga fasaxa.
6. Fadlan noo soo sheeg haddii aad rabto inaad hoos u dhigto qiimaha badeecada ee qaansheegta rarka si looga fogaado ama loo yareeyo waajibaadka kastamka ee dhinacaaga. Haddii kale, waxaan u isticmaali doonnaa cadadka dhabta ah sida la bixiyay.
7. Haddii loo baahdo, fadlan ku caawi warqad-bixiyaha caawimaad lagama maarmaan ah oo la xiriirta nadiifinta kastamyada gudaha.
8. Fadlan kafiiri walxaha hor yaal waraaqaha markay yimaadaan. Haddii alaabtu waxyeello soo gaadhay, fadlan isku day inaad hesho dukumiintiga dukumiintiga maxalliga ah ee jabinta, isla markaa, fadlan noo soo dir email sawirro ama fiidiyoow ah baakadaha iyo alaabada sida ugu dhakhsaha badan.
9. Haddii aadan helin rarkaaga 15 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda lacag bixinta, fadlan nala soo xiriir. Waxaan la socon doonnaa rarka oo dib ayaan kuugu soo laaban doonnaa ASAP.
10. Alaabooyinka la dalbaday kuma raaxeysan doonaan soo-celinta iyo dammaanadda haddii lambarradooda la jeexjeexo.
11. Waxaan bixinaa dammaanad tayo leh oo laba sano ah inta badan alaabooyinkayaga la iibiyo (shuruudaha gaarka ah waxay ku xiran yihiin kama dambaysta Proforma Invoice.).Haddii ay jiraan cillado ku jira isticmaalka caadiga ah muddadan, waxaan ku hagaajin doonnaa ama ku beddeli doonnaa bilaash warshaddeenna. Macaamiisha ayaa mas'uul ka ah rarka.